Siyaasa Itoophiyaa: Obbo Barakat Simoon eenyudha? - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Barakat Simoon qabsoo hidhannoo mootummaa Dargii aangoorraa buusee keessatti qabsaa'oota buleeyyii gareewwan garaa garaa keessatti hirmaachuun maqaan isaanii eeramu keessa tokko.
Erga qabsoon hidhannoo xumurameen boodattis, itti gaafatamummaa mootummaafi paartii olaanoo adda addaatiin kan tajaajilanii turan yoo ta'u, ifatti mullachuu kan eegalan garuu tibba Adda Bilisa Baasaa Tigraayi (ABUT) paartii ADWUI keessatti mummee ture keessatti walqoodinsi umamee turetti dura taa'aa paartichaa yeroo sanaa kan turan Obbo Mallas Zenaawii deggaruun dhaabachuu isaaniin ture.
Tibba sanattis hooggantoota ABUT keessatti namni ittigaafatamaan mootummaa olaanoo turan bakka gadhiisuu isaanitiin qaawwa umamee ture gutuuf, gara fuula duraatti asi bahuun ministira mummee yeroo sanaa Mallas Zeenaawii cinaa dhaabbachuun namoota garagaara keessaa tokko obbo Barakat turan.
Akkasumas Obbo Barakat Ministira Muummee yeroo sanaatti aansee dhimmoota paartii fi mootummaa ilaalchisuun waltajjiiwwan garaa garaa irratti bahuun namoota dubbatan keessaa sadrkaa lammaaffarratti argamu turan.
Yaadasaanii qindeeffachuun immamataa fi falaasama motummaa ibsuudhaan aanga'oota biroo caalaa ifatti kanneen mullatan akka ta'an ni himamaaf.
Namoonni paartichatti dhiheenya qaban akka dubbatanittis, barruu 'falaasama ADWUI' ittiin ibsamu kan taatee 'Addis Raayii' irrattis Obbo Mallasiitti aansee namoota maqaa peennaa isaanitiin barreessan keessaa Obbo Barakat haala yeroo fi siyaasa biyyattii irratti kanneen areeffamoota dhiyyeessan keessaa tokko ta'uu himu.
Filannoo ALI bara 1997 gaggeeffamee badiinsa lubbuu namoota qaqbsiisuun jeequmsa olaanaa gessisee tureeniis Obbo Barakat aanga'oota ADWUI kanneen mummeen fuldura turan keessaa tokkodha.
Waltajjiiwwan duula nu filadhaa dursa filannoo bakka bu'oota paartiilee biroo waliin gaggeefamaa ture keessattis Obbo Barakat imaamatawan ADWUI qabachuun mormaa akka turan ni yaadatama.
Dhimmoota wal morkisiisoo filannoon booda umamee ture irrattis, waltajjiiwwan hunda irrattu hanga jechisiisuun Obbo Barakat dursaan mul'ataa turan.
Filannoo bara 1997 gaggeefamee tureen Obbo Barakat paartiisaanii bakka bu'uun Godina Walloo Kaabaa Bugnaa keessatti kan dorgoman yoo ta'u, qabxii filannoo dursaatiin dorgomaa paartii mormituutiin mo'atamunsaanii himamee kan turee ta'ulleen, komii paartinsaanii dhiyeeffatee tureen filannoo irra deebitiin paarlaamaa galuu danda'aniiru.
Namoota dhaabbata isaaniifi isaan mormaniif obsa akka hinqabne kan himamu Obbo Barakat, keessattuu gaazexxeessitoota biroosaaniitti waamuun akkeekachiisaa fi jechawwan ciccimoo darbachaa akka turan kanneen mudannoo qaban ni dubbatu.
Tokko tokko ammoo Obbo Barakat sochiin walabummaa pireesii akka dadhabuufi gaazexeessitoonni biyyaa akka baqatanii gahee olaanaa qabaachusaanii haalawwan adda addaatiin kaasaa turaniiru.
Ofii Obbo Barakat eenyuu?
Obbo Barakat maatiisaa Eertiraanoota Gondar keessa jiraataa turan irraa dhalachuun achumatti guddachuu himama.
Maqaan maatiin isaa baasaniifis Mabraatuu yoo ta'u, maqaan abbaa isaa Obbo Gabrahiyiwoot akka ture kanneen dhiyeenyaan isa beekan ni dubbatu.
Faana obboleessa isaa angafaa hordofuunis miseensa Paartii Tokkummaa Ummata Itoophiyaa ta'uun gara qabsootti erga galaniin boodas, akka jijjirraa maqaa kana taasisee namoonni kunneen ni dubbatu.
Obbo Abbaaduulaa gaaffii irratti ka'aa turerratti maal jedhu?
Maaliif maqaasaa akka geeddarate beekamuu baatus, maqaa qabsaa'aa biraa akka fudhate himama.
Kunis namni qabsaa'aan Paartii Tokkummaa Ummata Itoophiyaa Barakat Simoon jedhamu akka tureefi tibba qabsootti sababii hinbeekamneen tasa dirree qabsootii baduusaatti miseensonni hedduun kan ajjeefame itti fakkaatee ture.
Muuxannoo tureenis qabsaa'aa kana yaadachuuf jecha Mabraatuu Gabrahiwoot maqaa guutuu Barakat Simoon akka fudhate himama.
Barakat eessaa garamitti?
Obbo Barakat Simoon jalqaba gara qabsoootti kan makaman miseensa Paartii Tokkummaa Ummata Itoophiyaa ta'uun.
Isaan booda dhaabbatichi miidhaa Dargii fi dhaabbilee mormitootaa kan birootiin irraa gahusaatiin walqoodiinsa dadhabuusaatiin mudateen wal qabate, qaawwa umameen qabsaa'oota biroo waliin dhaabbatichi dhiisuun bahan.
Obbo Barakat Simoon bara 2012tti
Paartii Tokkummaa Ummata Itoophiyaa irraa adda kan baha Obbo Barakat, qabsoo keessaa garuu gutummaatti hinbaane ture. Kanaafu hiriyoota isaanii waliin Paartii Koministii Itoophiyaa (PKI) baayyee hinturii hundeessan.
Ittaansees paartii amma Naannoo Amaaraa bulchaa jiruu Paartii Dimokiraatawa Amaaraaf ka'umsa kan ta'e Sochii Dimokraatawa Ummata Itoophiyaa hundeessuun ABUT waliin qindoomina umuun Dargii irratti qabaa'aniiru.
Kufaatii Dargiitiin boodas dhaabbileen sabootaa ifatti mullachuu eegalusaanitiin walqabatee, Sochiin Dimokraatawa Ummatoota Itoophiyaa bakka bu'insaafi fudhatama ummata Amaaraa argachuuf gara Sochii Dimokraatawaa Saba Amaaraa jedhuutti maqaasaa geeddaruun deebisee ofi ijaaruun baroota dheraaf paartii miseensa ADWUI ta'uun tureera.
Obbo Barakat namoota dhaaba Sochii Dimokraatawa Saba Amaaraa keessatti gahee olaanaa qabaachaa turan keessa tokkodha.
ADWUI keessattis nama mummee dhaaba Sochii Dimokraatawa Saba Amaaraa ta'uun murteessaa fi umaa turuun ni himama.
Aangoowwan motummaa mummee Obbo Barakat irra turan:
Ministira Waajjira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa
Ministira Gorsaa qo'annoo fi qorannoo imaammata Ministira Muummee
Sadarkaa ministiraatti Ittaanaa Daarektara Olaanaa Wiirtuu qorannoofi qo'annoo Imaammataa
Walitti qabaa boordii dhaabbata Televizhiniifi Raadiyoo Itoophiyaa
Dura taa'aa boordii Baankii Daldalaa Itoophiyaa
Obbo Barakatiifi paartii isaanii
Obbo Barakat ega du'a ministira mummee duraanii obbo Mallasiin booda, waltajjiiwwan siyaasaa irratti mul'achaa turan irraa kan fagaatan yoo ta'u, gorsaa imaammataa fi wiirtuu qorannoofi qo'annoo keessatti qofa daangeeffamuun turaniiru.
ALI bara 2010tti baatiiwwan duraarratti sababii hin ibsamneen tasa ministira mummee yeroo sanaa Obbo Haaylamaariyaam Dassaalanyiif xalayaa hojii gadhiisuu galfatanii turan. Booda keessa ammoo aangootti deebi'uun mata duree marii ta'anii ture.
Yeroo gabaabaan boodas iyyannoo hojii gadhiisuu kaasuun gara hojiitti deebi'usaanii ifatti beeksiisan.
Tibba mormiin biyyattiitti waggoota sadiif itti fufee ture sadarkaa olaanaarra gahee tureettis, aangoo gadhiisuu ministira mummeetti aansuun, jijjiramni paartiisaanii ADWUI keessatti taasifameen walqabatee jijjiramni paartii isaanii Sochii Dimokraatawa Saba Amaaraa keessatti akka dhufu taasiiseera.
Haa ta'u malee jijjiramni kun Obbo Barakatiif kan waan gaarii fidee hin dhufne. Bara darbe baatii Adooleessaa keessa tibba miseensa Koree Jiddugala Paartii isaanii turaniitti badii Korporeetii Xirat irratti raawwataniiru jedhameen miseensa koree Jiddugala Sochii Dimokraatawa Saba Amaaraa keessaa haqamaniiru.
Yaa'ii Sochii Dimokraatawa Saba Amaaraa jalqaba bara kanaatti gaggeessee tureenis, paartichaa deebiisee ijaaruun yeroo lammaffaaf jijjiirraa maqaa gochuun Paartii Dimokraatawa Amaaraa (PDA) ofii jedheera.
Obbo Barakatis erga paarticha irraa dhokamaniin booda ofiisaanii yaa looganii ykn yaa hari'amanii haala ifatti hinibsamiiniin adeemsa jijirama paartichaatti gara cimaatti darbatamuun turaniiru.
Dhumattis haala badii raawwataniiru jedhameetiin walqabatees torban kana keessa Amajjii 23 bara 2019tti mana jireenyaasaanii Magaalaa Finfinneetii qabamuun nama dhaabbaticha keessa waliin dhorkamanii turan kan biraa Obbo Taadasa Kaasaa waliin Magaalaa guddittii Naannoo Amaaraa kan taatee Baahir Daariitti geeffamaniiru.
Obbo Jawaar, Baqqalaafi biyyoota biroo kan jiraatan dabalatee shakkamtoota 24 irratti himatni shororkessummaa baname
19 Fuulbaana 2020
'Filannoon ni gaggeefama' jedhamuusaarratti yaadni paartilee mormitootaa maal?
Haroon Xaanaa guutee gandoota ja'a marsanii jiran liqimisee
Haacaaluu Hundeessaa: Artistii 'Oromoof qaalii' walleen qabsaa’e
Tasgabbiin siyaasaa dhibamuun dinagdee Itoophiyaarratti dhiibbaa 'qabaachuu mala'
16 Fuulbaana 2020
'Irreechi baranaa Fulbaana 23 fi Fulbaana 24 kabajama'
Naannoo Affaar daangaa Tigiraayitti poolisiin dargaggoota sadii ajjeese
Jijjiiramuu nootii birrii Itoophiyaa irratti wantoota beekuu qabdan
14 Fuulbaana 2020
'Maallaqa tasa jijjiiruun balaas gaarummaas qaba'
Kana dura nootiin birrii 500 Itoophiyaa keessa jiraachuu quba qabduu?
Itoophiyaatti balaa lolaa 'jaarraa tokkotti al tokko mudatuun' 500,000 ol miidhaman
Yeroo dhuma kan haaromfame: 9 Adooleessa 2020
Icciitii viidiyoo saalqunnamtii baasuun haaloo wal bahuun dabalaa jira
Namichi sa’aatiitti km150 osoo konkolaachisuu hirribni isa fudhate adabame
Loozaa Abarraa—Shamarree maqaa biyyashee dirree kubbaa Awurooppaarratti ol kaaste
Jawaar fa’i waan hin himatamneef abukaatonni ‘qaama bilisa baasu’ gaafachuufi
Yeroo dhuma kan haaromfame: 9 Fuulbaana 2019
Taateewwan ijoo bara 2012'tti Itoophiyaatti raawwatan